के हो किशोरीको हाइमेन ? भ्रम र निवारण ! « Sajha Page
के हो किशोरीको हाइमेन ? भ्रम र निवारण !
प्रकाशित मिति: June 9, 2018
वैशाख २१ | कतिपय देशमा विवाहको पहिलो रात ओच्छ्यानमा रगत लाग्नुपर्ने अन्धविश्वास छ, तर सुहागरातका बेला सबै महिलाको रगत बग्नुपर्छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन, किनभने एक अध्ययनअनुसार ४३ प्रतिशतमा मात्र पहिलो सम्पर्कमा रगत बग्छ । पहिलो पटकको यौनसम्पर्कका बेला नवदुलहीको हाइमेन च्यातिएपछि बग्ने रगतलाई कुमारित्वको प्रमाणका रूपमा लिइए पनि केही बालिका हाइमेनबिनै जन्मिने, सबैमा हाइमेन कमलो नहुने, खेलकुद, घोडचढी, साइक्लिङलगायतका शारीरिक अभ्यासका क्रममा च्यातिन सक्ने, स्यानिटरी प्याडको सट्टा ट्याम्पुनको प्रयोगले, कसैकसैको महिनावारी सुरु भएपछि यसमा भएको प्वाल (छिद्र) ठूलो हुँदै जान सक्ने तथ्य चिकित्सा विज्ञानले पत्ता लगाइसकेको छ । यसको विपरीत कतिपयको हाइमेन निकै लचिलो भै कहिल्यै नच्यातिने वा च्यातिए पनि रगत नबग्ने हुन्छ भने कतिपय हाइमेन रहँदै पनि गर्भवती हुन सक्छन् ।
हाइमेन पूरै वा आंशिक रूपमा बाह्य योनिद्वार ढाक्ने पातलो झिल्ली हो । यसमा सानो छिद्र हुन्छ । महिनावारीका बेला यहीँबाट रगत निस्कन्छ । जन्मदै धेरैजसो बालिकामा हुने यो हाइमेन बाल्यावस्थामा चन्द्रमा आकारको भए पनि त्यसमा केही विविधता हुन सक्छ । करिब शून्य दशमलव ००३ प्रतिशत बालिकामा जन्मजात हाइमेन हुँदैन । हरेक वर्ष एक मिलिमिटरका दरले हाइमेनको आकार ठूलो तथा लचिलो हँुदै जान्छ । पाँच महिनाको गर्भमै बनिसक्ने हाइमेन स्कुले उमेरमा क्रमश: पातलो, कमलो एवं पारदर्शी हुँदै जान्छ ।
स्त्री जननेन्द्रियको विकासक्रममा देखिने कुनै पनि खराबीले हाइमेनलाई असर गर्न सक्छ । हाइमेनसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो जन्मजात समस्या हाइमेनमा प्वाल नहुनु हो । बाक्लो हाइमेनमा छिद्र नभै महिनावारीको रगत बाहिरिन नसक्ने अवस्थामा योनिमा रगत जम्मा भै सिर्जना हुने पीडादायक अवस्थालाई क्रिप्टोमेनोरिया भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा सानो शल्यक्रिया गरी जमेको कालो रगत निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।
हाइमेनलाई कुमारित्वको पर्यायका रूपमा लिइए पनि यो फरक कुरा हो । कुमारित्व साधारण कुराजस्तो लागे पनि कतिपय समाजमा यदि पहिलो रात योनिबाट रगत बगेन भने लाजमर्दो स्थिति वा बेइज्जतिका रूपमा लिइन्छ । विवाहपछि मात्र यौनसम्बन्ध राख्न स्वीकृति दिने कतिपय धार्मिक परम्परामा यदि जान–अन्जानमा नियम तोडिएको छ भने कडा खालको सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विपत्तिबाट जोगिन कतिपयले चलाखी गरी रगत बगेको देखाउन जनावरको रगत प्रयोग गर्ने, गोप्य अङ्गमा आपैंmले घाउ बनाउने कामसमेत गर्छन् । कतिपय बाध्यतामा परेका वा धनाढ्य महिलाले हाइमेन सच्याउने शल्यक्रिया पनि गराउँदै आएका छन् । कृत्रिम हाइमेन पनि किन्न पाइन्छ । कृत्रिम हाइमेनलाई योनिद्वारमा राम्रोसँग टाँसेको खण्डमा त्यो पनि असली हाइमेनजस्तै देखिन्छ ।